Koox Islaamiyiin looga shakisanyahay oo Mozambique dad ku laaysay - Worldnews.com
Koox Islaamiyiin looga shakisanyahay oo Mozambique dad ku laaysay
Weerarka lagu qaaday gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique ayaa
Seddex dagaalyahan oo Islaamiyin ah ayaa lagu xiry gobolka Nampula oo dhaca waqooyiga dalkaasi Mozambique, kuwaasi oo loo qabtay dilal is xig-xigay oo gobolka ka dhacay tan...
Maleeshiyaad Falastiiniyiin ah oo madaafic ku weeraray Israa'iil
Maleeshiyaad Falastiiniyiin ah oo ku sugan Qaza ayaa dhowr madaafic ku weeraray Israa'iil dhacdadaasi oo noqotay weerarkii ugu waynaa sanado badan ka hor dhaca. Waxaa lagu...
Al-Shabaab oo weerar ka fulisay markii ugu horeysay dal ka baxsan Bariga Africa
Tobban qof Rayid ah ayaa waxaa tuuladda Palma oo ku taala dalka Mozambique, ku gaw-racay Rag hubeysan oo ay dadka deegaanka ku sheegeen inay ahaayeen dagaalyahano ka tirsan...
Gareowe Online 2018-05-29
Waxaa dhowaanahan sii kordhayayey qalalaasaha ka dhacay gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique. ......
​Xiisad ka dhalatay Nabadoono lagu dilay Caabud-waaq
CAABUD-WAAQ, Somalia- Labo Nabadoon ayaa lagu dilay, 10 kalena waa lagu dhaawacay weerar xalay ka dhacay degmada Caabudwaaq, ee gobolka Galgaduud. Koox hubaysan, oo aan...
Gareowe Online 2016-09-08
Weerar ka dhacay California oo dad ay ku dhinteen
Weerar toogasho ah ayaa ka dhacay iskuul hoose oo ku yaalla California. Ugu yaraan afar qof ayaa dhimtay, sidoo kalena ninkii hubeysnaa ayaa ku dhantay weerarka. Ma cadda...
Weerar toogasho ah ayaa ka dhacay iskuul hoose oo ku yaalla California. Ugu yaraan afar qof ayaa dhimtay, sidoo kalena ninkii hubeysnaa ayaa ku dhantay weerarka. Ma cadda in wax caruur ah ay ka mid yihiin dadka weerarka ku dhintay. Dhawr qof oo ay ku jiraan laba caruur ah...
Booliska Berlin oo xiray masaajid uu tagi jiray Anis Camri
Booliska Jarmalka ayaa qaaday howlgal laga fuliyay magaalada Berlin kaas oo laga lala eegtay dhismayaal uu leeyahay masaajid. Waxaa la sheegayaa in dhismayaasha uu adeegsaday Anis Camri oo ka dambeeyay weerar December lagu qaaday suuq ku yaalla Berlin. Boolis aad u badan ayaa la geeyay guryo iyo xarumo ganacsi oo baaritaan laga sameeyay. Hay'ad maamusho masaajid ayaa sidoo kale...
Booliiska Berlin oo howlgal ka fuliyay Masaajid
Saddex ruux ayaa la dilay guryo dhawr ahna waa la gubay ka dib markii malayshiyo loo malaynayo Al Shabaab ay weerartay deegaanka Maleli ee ka tirsan degmada Lamu ee dalka Kenya, sida uu ku warramayo wargayska Standard. Wargays kale oo dalka Kenya ka soo baxa ayaa qoray in saddexda ruux ee la dilay kurka laga gooyay weerarkaasina uu dhacay habeennimadii Khamiista. Wargeyska Star...
Ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay iskool ku yaalla magaalada Parkland ee gobolka Florida, kadib markii arday 19 jir ah uu rasaas ooda uga qaaday iskool ku yaalla halkaasi. Ninka la sheegay inuu weerarka geystay ayaa lagu magacaaba Nikolas Cruz, waxaana uu ahaa arday laga eryay isla iskoolkaasi. Intii uu socday weerarka ayaa ciidmamada booliska waxaa ay dhismaha iskoolka ka...
In this 18-minute travel documentary, Usha Alexander presents some of what she saw and learned during her wonderful 15-day trip to Mozambique in October 2015. For more photos and information, check out the Mozambique page on shunya.net: http://www.shunya.net/Pictures/Mozambique/Mozambique.htm Narration, script, and editing: Usha Alexander Videography: Namit Arora...
In this 18-minute travel documentary, Usha Alexander presents some of what she saw and learned during her wonderful 15-day trip to Mozambique in October 2015. For more photos and information, check out the Mozambique page on shunya.net: http://www.shunya.net/Pictures/Mozambique/Mozambique.htm Narra